WordPress: Bipute WordPress na-akpaghị aka | Martech Zone
WordPress: Bipute WordPress na-akpaghị aka
Wednesday, February 21, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Nnọọ ole na ole nke blọọgụ m na-agụ biputere mgbe ọ bụla a kwalite WordPress nkwalite. Ọ bụ n'ezie ntakịrị iwe ma enwere m mmasị n'eziokwu na ọtụtụ ndị folks na-echegbu ma na-achọ ị nweta okwu ahụ ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-ede blọgụ na-amasị ịkwado ya, echegbula ide post - nwere WordPress na-akpaghị aka tinye ya na blog gị site na iji post site na email!
Nke a bụ otu:
Debe adreesị ozi-e siri ike, nke siri ike maka akaụntụ gị nke na ọ nweghị onye ga-eche ịkọ.
Melite Post Via Email na WordPress na adreesị ozi-e na ozi POP ndị ọzọ gị:
Ugbu a debanye aha maka Nkwupụta Nkwupụta na Adreesị Email ahụ na WordPress:
Voila! Ugbu a WordPress ga-eziga Nkwupụta Ntọhapụ ozugbo na post na saịtị gị!
Mmelite: You nwere ike ịchọrọ itinye koodu ụfọdụ iji dochie anya ederede ọ bụla na adreesị email gị ma ọ bụ njikọ njikọ aha gị. M na-adịghị n'ezie natara otu n'ime ndị a ozi ịntanetị ma I'll ma Aga m chepụta otú ime na ozugbo m na-enweta m mbụ.
WordPress Plugin: PostPost (Emelitere)
WordPress: Etu esi ewu Tag Cloud Page
Feb 28, 2007 n’elekere 12:52 nke abali
Ezigbo elo. Ọzọkwa na, m maara n'ezie, nke a echiche nke post site email maka wordpress anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Yabụ m ga-akwado BlogMailr
Nke a na - arụ ọrụ nke ọma dịka enwere ike ịhụ site na ọkwa m.